Prospan Chesty Cough Relief ကို တိုက်ကပ်နွယ်ပင်အရွက်နဲ့ အဓိ ကဖော်စပ်ထားပြီး Germany မှထုတ်လုပ်ထားသော ချောင်းဆိုး ရင်ကျပ် ခြင်းနဲ့ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအတွက် အထိရောက်ဆုံး ကုပေးပါသည်။
Prospan ကို အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ မွေးခါစ ကလေးများလည်း သောက်သုံးနို်င်ပြီး သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်မှ ထုတ်လုပ်ထားလို့ အေအးမိခြင်းမှ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ရင်ကြပ်ခြင်း နှင့် သလိပ်များပျော်စခြေင်း၊ နာ တာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါများကို တားဆီးကုသေပးပြီး လည်းပင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။
အညွှန်း - အတိုင်းအတာခွက်တစ်ခုပါပြီးမွေးကင်းစမှ2နှစ်အ ထိ 2.5ml တစ်ရက်ကိုနှစ်ကြိမ်
2 နှစ်မှ5နှစ်အထိ 2.5ml တစ်ရက်ကို သုံး ကြိမ်
6 နှစ်မှ 16 နှစ်အထိ5ml တစ်ရက်ကို
3 ကြိမ် လူကြီး5- 7.5ml တစ်ရက်လျှင်သုံးကြိမ် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Hippocrates, the “Father of Medicine” (460 to about 375 BC), helped to establish the tremendous popularity of ivy asamedicinal plant. He still knew nothing about its healing ingredients, however. Rather, he believed in gods and spirits who lived in the plants and gave them their healing power.
Visitors : 446130